အခုလိုအချိန်မှာ အလှူလှူချင်တာတောင်ဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်နေလို့ အကြွေးနဲ့လှူထားရတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Top Stars
အခုလိုအချိန်မှာ အလှူလှူချင်တာတောင်ဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်နေလို့ အကြွေးနဲ့လှူထားရတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
March 26, 2021 By admin2News
ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေတစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက် မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်. ခုချိန်မှာ ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ CRPH အတွက် ပြည်သူတိုင်းက တတ်နိုင်သလောက်အလှူငွေ ထည့်နေကြတာဖြစ်ပြီး ပိုင်ဖြိုးသုတို့ကလည်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းချင်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲကို သူမရဲ့လှူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ တင်ထား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ကိုယ်တွေလည်းဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့မို့ Visa Card မပြောနဲ့ Mobile banking တောင်သုံးဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ဆိုသော်ငြားလည်း Federal Army ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် CRPH ကိုလှူချင်လွန်းလို့ UK ကအဒေါ်ကိုလှမ်းပြီး$500ဖိုးသမီးအစားလှူပေးပါလို့ ပြောပြီး အကြွေးနဲ့လှူထား တယ် …(အဒေါ်ခမျာScreenshotတွေဘာတွေတောင်မလုပ်တတ်လို့ကိုယ်သင်ပေးလိုက်မှသူ့ဘဏ်ကဖြတ်သွားတဲ့ statementလေးကိုပဲလှမ်းပို့ပေးရှာတယ် ကိုယ်တွေကအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး tech wizတွေ 🤣)နိုင်ငံခြားကမြန်မာတွေ လှူပေးတာကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ဒီမှာကလူတိုင်းမှာ Visa cardမရှိကြဘူးဆိုတော့
လေ (သုသုနဲ့ကိုဏကြီးဆိုနှစ်ယောက်ပေါင်းမှတစ်ကဒ်ပဲရှိတာ)သူငယ်ချင်းတွေလှူကြတာလည်း နည်းနည်းခက်တဲ့လူအတွက်ခက်တယ် တချို့ကျတော့လည်းလျှောလျှောလျူလျူပဲလှူလို့ရတယ်ပြောတယ်…နည်းနည်းခက်လည်း ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါနော်…လှူလို့ရတဲ့ linkကဒီမှာပါ 👇ဆိုပြီးရေးတင်ထား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုကျတာဏကွီးနဲ့ ပိုငျဖွိုးသုတို့ ဇနီးမောငျနှံတော့ လကျရှိမှာမွနျမာပွညျမှာဖွဈနတေဲ့အရေးတှကွေောငျ့ ဖမျးဝရံထုတျခံထားရပမေဲ့လညျး ဇှဲမလြှော့ဘဲ အမွဲတမျးတကျကွှစှာပါဝငျပေးနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ အှနျလိုငျးပျေါမှာလညျး ဝဖေနျခံရမှုတှတေဈခြို့ရှိခဲ့ပမေဲ့ နောကျ မဆုတျဘဲ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရှိနပေေးလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားနိုငျသူလေး ဖွဈပါတယျ. ခုခြိနျမှာ ပွညျသူ့အစိုးရဖွဈတဲ့ CRPH အတှကျ ပွညျသူတိုငျးက တတျနိုငျသလောကျအလှူငှေ ထညျ့နကွေတာဖွဈပွီး ပိုငျဖွိုးသုတို့ကလညျး ထညျ့ဝငျလှူဒါနျးခငျြပမေဲ့ ဖွဈနတေဲ့အခကျအခဲကို သူမရဲ့လှူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ တငျထား ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အခုခြိနျမှာ ကိုယျတှလေညျးဟိုပွေးဒီပွေးနဲ့မို့ Visa Card မပွောနဲ့ Mobile banking တောငျသုံးဖို့အခကျအခဲတှနေဲ့ဆိုသျောငွားလညျး Federal Army ဖွဈမွောကျရေးအတှကျ CRPH ကိုလှူခငျြလှနျးလို့ UK ကအဒျေါကိုလှမျးပွီး$500ဖိုးသမီးအစားလှူပေးပါလို့ ပွောပွီး အကွှေးနဲ့လှူထား တယျ …(အဒျေါခမြာ
Screenshotတှဘောတှတေောငျမလုပျတတျလို့ကိုယျသငျပေးလိုကျမှသူ့ဘဏျကဖွတျသှားတဲ့ statementလေးကိုပဲလှမျးပို့ပေးရှာတယျ ကိုယျတှကေအဲ့လိုတဈမြိုးလုံးတဈဆှလေုံး tech wizတှေ 🤣)နိုငျငံခွားကမွနျမာတှေ လှူပေးတာကပိုအဆငျပွမေယျထငျတယျ ဒီမှာကလူတိုငျးမှာ Visa cardမရှိကွဘူးဆိုတော့
လေ (သုသုနဲ့ကိုဏကွီးဆိုနှဈယောကျပေါငျးမှတဈကဒျပဲရှိတာ)သူငယျခငျြးတှလှေူကွတာလညျး နညျးနညျးခကျတဲ့လူအတှကျခကျတယျ တခြို့ကတြော့လညျးလြှောလြှောလြူလြူပဲလှူလို့ရတယျပွောတယျ…နညျးနညျးခကျလညျး ဝိုငျးကွိုးစားပေးကွပါနျော…လှူလို့ရတဲ့ linkကဒီမှာပါ 👇ဆိုပွီးရေးတငျထား ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
မိသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီး သူမရဲ့မွေးနေ့ကို အခက်အခဲတွေများစွာကြားထဲက ရေးသားထားတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးကြောင့် ကြည်နူးနေတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ဇနီး
လူနာများတင်ဖို့အတွက် ကား အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အသင်းကို ကားတစ်စီးလှူဒါန်းရန် သူကိုယ်တိုင် ၁၀ သိန်းကျပ်မတည်ပြီးလိုအပ်တဲ့ငွေများကို အားနာနာနဲ့ပဲအလှူခံလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း